Ithegi: mailchimp | Martech Zone
I-UltraSMSScript: Thenga i-SMS epheleleyo, iMMS, kunye neQonga lokuThengisa ngeLizwi nge-API
Ukuqala isicwangciso somyalezo obhaliweyo kunokuba yinkqubo enzima yokuphumeza. Uyakholwa okanye awukholwa, abathwali basebenza ngesandla nanamhlanje... ngenisa amaphepha, ugcino lwedatha yakho kunye nemigaqo-nkqubo yabucala ijongiwe, kwaye usayine kwiimvume zeSMS. Andizami ukukujongela phantsi ukubaluleka kokuthotyelwa kwesi siphakathi, kodwa ukuphazamiseka kokufuduka okanye ukudibanisa isisombululo se-SMS kunokuphazamisa kakhulu kumthengisi osekelwe kwimvume, osemthethweni. Inkqubo yeNtengiso yeSMS ilungile
Amaphepha aphambili: Qokelela iiNkokeli ezinamaPhepha okuHlala aphendulayo, iiPopups, okanye iiBar zesilumkiso
I-LeadPages liqonga lephepha lokumisa elikuvumela ukuba ushicilele itemplate, amaphepha aphendulayo okumisa ngekhowudi yawo, ukutsala kunye nokulahla umakhi nje ngokuchofoza okumbalwa. NgeLeadPages, unokwenza ngokulula amaphepha okuthengisa, amasango amkelekileyo, amaphepha okumisa, amaphepha okuqalisa, ukucudisa amaphepha, ukuqalisa amaphepha angekudala, enkosi amaphepha, amaphepha enqwelo-mafutha, amaphepha athengiswayo, malunga nam amaphepha, amaphepha odliwano-ndlebe nokunye… 200+ iitemplates ezikhoyo. NgeLeadPages, unga: Yenza ubukho bakho kwi-intanethi - yenza
Iifowuni: Yenza iiWebhusayithi zeNtengiso zeNtengiso kunye namaPhepha okuLanda ngeMizuzu usebenzisa ifowuni yakho
NgoMgqibelo, Novemba 27, 2021 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Oku kunokubacaphukisa abanye abantu kwishishini lam, kodwa iinkampani ezininzi azinayo imodeli exhasa utyalo-mali kwindawo enkulu yokusasazwa kunye nesicwangciso sokuthengisa umxholo. Ndazi amashishini amancinci ambalwa asahamba kwindlu ngendlu okanye axhomekeke kwilizwi lomlomo ukuxhasa ishishini elinomtsalane. IiPhonesites: Qalisa amaPhepha ngemizuzu Lonke ishishini kufuneka lilinganise ixesha lomnini walo, umzamo, kunye notyalo-mali ukuvelisa eyona nkqubo isebenzayo yokuthengisa ukuzisa.